DroppTV: Uchishandisa AI Kuziva Uye Kutengesa Zvigadzirwa muVhidhiyo | Martech Zone
Mhando dziri kuwedzera kushandisa tekinoroji kugadzira zviitiko zvitsva zvekutenga munguva yekugara-pamba. Uye, panguva imwecheteyo, indasitiri yevaraidzo iri kumanikidzwa kutsvaga dzimwe nzizi dzemari panguva iyo dzimba dzemitambo nenzvimbo dzemimhanzi zvakavharwa.
pinda droppTV, yepasirose-yekutanga kutengeseka kutenderera chikuva. Kutaurirana nemavhidhiyo emimhanzi, droppTV inoita kuti vateereri vaone zvemukati pavanenge vachitsvaga zvakamisikidzwa zvitoro zvepop-up kutenga mashoma-edition emumigwagwa. Ipuratifomu inogonesa vagadziri (uye mabhureki) kuita mari mavhidhiyo avo, zvinoratidzwa, uye mafirimu kuburikidza neayo patent yepamusoro AI smart vhidhiyo tekinoroji.
droppTV yakanyanya kutarisana nezvezvigadzirwa izvozvi - kukanganisa kushambadzira kwechinyakare, zvekutengesa, uye mavhidhiyo maparagiramu. Iyo yekushambadzira yekutengesa chikuva pamharadzano yemumhanzi, tsika, fashoni, uye mukurumbira uyo unopa masimba maartist kugadzira zvisikwa zvepop-up mumavhidhiyo emimhanzi kuitira kuti vatengese zvavanotengesa, vashoma-vhezheni, uye zvipfeko zvemumigwagwa zvipfeko.
Isu tinofara kuve tiri kubatsira maartist uye mafeni kuti vaone uye vabatane pamwe nemumwe padanho rakadzika. Mimhanzi mavhidhiyo akasarudzika chaizvo sezvaari pamharadzano yetsika, hunyanzvi, mimhanzi, uye fashoni uye yaive sarudzo iri pachena yekutanga kushandiswa kukuru kwetekinoroji yedu.
Gurps Rai, droppTV CEO & Co-Muvambi
Iyo chikuva inoshandisa chakagadzirwa njere kuziva zvigadzirwa mukati memavhidhiyo, zvichibvumira mugadziri kana muridzi wevhidhiyo kuti aite mari vhidhiyo nekupa yakananga kutengesa kune icho chigadzirwa. Uku ndiko kufambira mberi kunoshamisa muhunyanzvi nematoni eanogona.
Ipuratifomu inofambiswa nekambani yekuchenjera yekambani, kudzidza kwemuchina, uye macomputer ekuona algorithm. Vataridzi vanogona kutarisa nekutenga pane chero chinhu - smartphone, piritsi, kana desktop. Iyo nharembozha inowanikwa ikozvino iOS uye pamusoro Android uye ichakurumidza kuwanikwa paAppleTV.
Fungidzira kutenderera masevhisi achiita mari yega yega vhidhiyo ine akawanda zvigadzirwa hotspots mukati mavhidhiyo akasungirirwa kungoro. Kana, pamwe kana uri mucherechedzo, unogona kuhaya mugadziri uye wobvunza simba ravo kuti vatengese chigadzirwa chako kubva pavhidhiyo yavo.
Ini ndaigona kunyatsoona Amazon, munguva pfupi iri kutevera, ichipa mukana wekuvhura hwindo rekutenga iwe uchiona FireTV yako, uchienda kune chigadzirwa chiri pachiratidziro, wobva waiwedzera kune yako Amazon yekutengera ngoro.
Iri ndiro ramangwana rekutengesa-rinotungamirwa zvemukati, kutora echinyakare zvekutengesa uye vhidhiyo mamodheru uye kuvasanganisa ivo kuti vagadzire chimwe chinhu chitsva kusvika kune mutengi anotyairwa ne Zvione. Kuida. Zvitenge. kukurudzira.
Kana iwe uchifarira kushandisa dropp.tv semutengi, unogona kusaina pano:
Gadzira Akaunti yeDropp.tv
Tags: aikudonhadropp.tvkuchinjakushambadzira kushambadziraMimhanzi yemimhanzivhidhiyo ecommerce